Wabiga Niil wuxuu noqdaa mid sii yaraada lana sii saadaaliyo | Saadaasha Shabakadda
Webiga Niil oo ka mid ah wabiyada ugu muhiimsan ee bini’aadamka hore iyo maanta labadaba, ayaa noqonaya mid sii yaraanaya lana sii odorasayo sababo la xiriira isbedelka cimilada. Qiyaastii 400 milyan oo qof oo wadar ahaan 11 dal ah ayaa ku tiirsan, laakiin hadda, sida lagu sheegay daraasado kala duwan, waa inay qaadaan tallaabooyin culus si looga fogaado abaaraha iyo daadadka culus..
Biyaheeda, oo muhiim u ah dalagyada, ayaa la bartay tan iyo wakhtigii fircoonnadii. Waqtigaas, taxane "nilometers" ah ayaa loo dhisay si loo ogaado, loo saadaaliyo loona xakameeyo baaxadda daadadka sannadlaha ah. Laakiin isbeddelka cimilada, dhismayaashani uma badna inay ku filnaadaan.
Dadku aad ayey u sii kordhayaan. Markay tahay sanadka 2050, la filayo inuu ku labanlaabo dooxada Niilka, oo ka socda 400 milyan illaa 800, sidaa darteed hadda in ka badan sidii hore waxay ku tiirsan yihiin wabiga. Isugeynta joogtada ah ee kaarboon laba ogsaydhka hawada awgeed, roobab mahiigaan ah ayaa laga yaabaa inay aad iyo aad u badan yihiin, taas oo macnaheedu noqon doono in daadadka ay noqon doonaan kuwa soo noqnoqda.
Wabiga waxaa saameynaya wareegga isbedbeddelka heerkulka badda Baasifigga: sanadkii 2015, dhacdadii El Niño waxay sabab u ahayd abaar daran oo saameysay Masar; sanad kadib, La Niña waxay sababtay daadad waaweyn.
Maareynta qulqulka biyaha webiga waxay ahayd arrin siyaasadeed muddo tobanaan sano ah, haddana waxay noqoneysaa mid sii murgsan marba marka ka dambeysa waqtiga oo heerkulku sii kordhayo. Baarayaasha ayaa ka digay in Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika labadaba ay noqon karaan kuwa aan la jeclaan karin; Ka sokow, celceliska mugga qulqulka webigu wuu kici karaa inta u dhexeysa 10 ilaa 15%, awood u lahaanshaha inuu kordho ilaa 50%, si dhibaatooyinka ay uga sii daraan si aad ah.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato, samee halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Wabiga Niil wuxuu noqdaa mid sii yaraada lana sii odoroso